नौ सय मिटर तल बस खस्दा भाग्यले बाँचेका बालक ! - SamudayikNews
बुटवल । चौराहा हस्पिटलको वेड नम्बर २ मा आमाछोरा रक्ताम्मे भएर लडिरहेका छन् । उनीहरू एक आपसमा हेराहेर गर्दछन् तर पनि खुलेर बोल्न सक्दैनन् । चाहेर पनि उनीहरू पहिलाजस्तो खुलेर हाँस्न बोल्न सक्दैनन् । सन्धिखर्क नगरपालिका–७ का साढे दुई वर्षीय रिजन कुँवर र उनकी आमा सपना कुँवर अहिले पनि बुधबारको घटना सम्झेर झसंग हुन्छन् ।
दुवै जना अर्घाखाँचीको नरपानीमा भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा घाइते भएका हुन् । उनीहरूको अवस्था अहिले खतरामुक्त रहेपनि आँखै अगाडि १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको सो घटनाबाट झस्कि रहन्छन् । रिजनको टाउकोमा सेतो पट्टी, दाहिने खुट्टा भाँचिएको र हातमा चोट लागेको छ । उनी एकोहोरो आमाको मुखमा हेर्दै रोइरहन्छन् । बसबाट ओर्लिन केही समय जतिको बाटो मात्रै बाँकी हुँदा उनीहरू रहेको बस दुर्घटनामा परेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
रिजनजस्तै अस्पतालमा कपिलवस्तु कोईली बनगाँईका–३ वर्षीय स्पर्श पोखरेलको पनि उपचार भइरहेको छ । उनको पनि टाउकोमा चोट लागेको छ । आमा विमला पोखरेल पनि घाईते अवस्थामा छिन् । उनको मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । विमलाको कान्छा छोरा ३ महिनाका शोभाखर पोखरेलको निधन भएको छ । त्यसैगरी सन्धिर्खक नगरपालिका–७ खाँचीकोटका १ वर्षीय गणेश पुरी पनि घाईते अवस्थामा चौराहा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनकी आमा माया पुरीको भने घटनास्थलमै निधन भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
Prevबाहुनकी छोरी र विश्वकर्माको छोराबीच विवाह
Next०७६ मङ्सिर १४ गते शनिबार ई. स. २०१९ नोभेम्बर ३० तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य